निर्वाचनको दिन सवारी साधन चलाउन यस्ताे छ मापदण्ड (विवरणसहित)
May 6, 2022 May 6, 2022 N88LeaveaComment on निर्वाचनको दिन सवारी साधन चलाउन यस्ताे छ मापदण्ड (विवरणसहित)
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ को मतदानको दिनका लागि सवारी आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी गरेको छ । आयोगबाट यही वैशाख २२ गते स्वीकृत भएको सो मापदण्डमा उम्मेदवार वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधिले मतदानको दिन सवारी साधन चलाउनका लागि तोकिएबमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन […]
निःशुल्क मलेशिया पठाउने भन्दै ‘आरजु म्याडम’ले दिएको आश्वासन यस्ताे छ हेर्नुस् भिडियाे
May 6, 2022 N88LeaveaComment on निःशुल्क मलेशिया पठाउने भन्दै ‘आरजु म्याडम’ले दिएको आश्वासन यस्ताे छ हेर्नुस् भिडियाे
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी एवं कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणा देउवाले निःशुल्क मलेशिया पठाउने भनेर दिएको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको छ । चुनावी सभामा राणाले निःशुल्क मलेशिया पठाउने भनेर दिएको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको हो । प्रधानमन्त्रीपत्नी राणाले धनगढीमा चुनावी सभालाई सम्बोधनका क्रममा कांग्रेसलाई भोट दिए स्थानीयलाई फ्री भिसा र फ्री टिकटमा मलेसिया पठाइ दिने आश्वासन […]
जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली माइकाे दर्शन गरी हेर्नुस शनिबारकाे राशिफल !
May 6, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली माइकाे दर्शन गरी हेर्नुस शनिबारकाे राशिफल !
केही राशिका लागि शनिबारको दिन राम्रो रहनेछ। शनिबार सिंह राशिका व्यक्तिहरूले व्यर्थको भविष्यको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। अर्कोतर्फ, तुला राशिका व्यक्तिहरूले घुम्न र किनमेल गर्ने मन बनाउन सक्छन्। हेर्नुस आजकाे राशिफल मेष– यस राशिका व्यक्तिका सबै काम सफलताका साथ सम्पन्न हुने सम्भावना छ । आफ्नो काम लगनशीलतापूर्वक गर्नुहोस्। जागिरको हकमा काममा ध्यान दिनुपर्छ । सायद […]
सिंह देखा परेको खबर पाएर खोज्न जाँदा झोला फेला परेपछि…
May 6, 2022 N88LeaveaComment on सिंह देखा परेको खबर पाएर खोज्न जाँदा झोला फेला परेपछि…
काठमाडाैं । केन्याको एउटा राष्ट्रिय निकुञ्जनजिकै अवस्थित गाउँमा एउटा सिंह देखा परेको सूचना पाएपछि सो ठाउँमा आवश्यक कारबाही गर्न तीनजना सशस्त्र वनरक्षक पुगे।तर त्यहाँ झाडीमा सिंह नभई सिंहको टाउको छापिएको एउटा झोला फेला पर्दा उनीहरू चकित भए। माउन्ट केन्या राष्ट्रिय निकुञ्जबाट एक किलोमिटर पर किन्याना गाउँमा एउटा कृषि फार्ममा काम गर्ने एक व्यक्तिले आफ्ना रोजगारदाताको […]
May 6, 2022 N88LeaveaComment on जात्रै जात्राकाे इतिहास बाेकेकाे ठाउँमा उभिर माधव नेपालले भने ‘जात्रा देखाउनेलाई बिर्सेर पनि भाे नदिनु’
काठमाडाैं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा वाम–लोकतान्त्रिक प्रगतिशिल र दक्षिणपन्थी गठबन्धनको बीचमा सङ्घर्ष भएको बताउनुभएको छ । संविधान जोगाउने, सुशासन कायम गर्ने, गणतन्त्रका हिमायती, धर्मरिनपेक्षताका पक्षधर प्रगतिशिल गठबन्धनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले यही गठबन्धनको पक्षमा मतदात गर्न आम मतदातालाई आग्रह गर्नुभयो […]
रूखमा भाेट माग्दै रत्नपार्ककाे शान्तिबाटिकाबाट प्रचण्डले गरे यस्ताे उद्घाेष !
May 6, 2022 N88LeaveaComment on रूखमा भाेट माग्दै रत्नपार्ककाे शान्तिबाटिकाबाट प्रचण्डले गरे यस्ताे उद्घाेष !
काठमाडाैं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकता, सहकार्य, सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न सबैलाई आग्रह गर्दै संविधान, गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशितालाई जोगाउन कायम भएको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई विजयी गराउन आग्रह गर्नुभएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट आयोजित संयुक्त चुनावीसभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धनलाई लामो समयसम्म लैजाने, देश र जनताको […]
May 6, 2022 N88LeaveaComment on स्वास्थ्य संस्थामा पनि दुई दिन बिदा दिइने
काठमाडाैं । सरकारले आगामी जेठदेखि साताको दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल) मा पनि बिदा दिने तयारी गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारको निर्णयानुसार दुई दिन सार्वजनिक विदाअनुसार नै स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल) मा पनि बिदा दिने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका डा.रोशन पोखरेलले सरकारको निर्णयानुसार मन्त्रालयले पनि अस्पतालमा […]
यसरी गरौं मतदान, मनपरेकाे उम्मेदवारलाई दिएकाे भाेट बदर नहाेस !
May 6, 2022 N88LeaveaComment on यसरी गरौं मतदान, मनपरेकाे उम्मेदवारलाई दिएकाे भाेट बदर नहाेस !
काठमाडौं । यही वैशाख ३० गते देशभर एकै चरणमा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले सो दिन बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदानको समय निर्धारण गरेको छ । मतादाताले आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई मतदान केन्द्रमा पुगेर मत दिन सक्नेछन् । ७५३ स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित सदस्य र […]
सत्ता गठबन्धनको आज काठमाडौंमा चुनावी सभा, क-कसले सम्बाेधन गर्दैछन् ?
May 6, 2022 N88LeaveaComment on सत्ता गठबन्धनको आज काठमाडौंमा चुनावी सभा, क-कसले सम्बाेधन गर्दैछन् ?
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलको आज काठमाडौंमा संयुक्त चुनावी सभा हुँदै छ । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलक्षित सभा गर्न लागिएको जनाइएको छ । दिउँसो १ बजेदेखि काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्ति वाटिकामा सभा हुने नेपाली कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । सभालाई पाँचै दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने उनले बताए […]
मतदाताको प्रश्न : घण्टाघरको सुई कहिले घुम्छ ?
May 6, 2022 N88LeaveaComment on मतदाताको प्रश्न : घण्टाघरको सुई कहिले घुम्छ ?
कर्णाली । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित घण्टाघरको घडीको सुई १० वर्षदेखि घुम्दैन । यहाँ रहेका चारवटै घडीले १०ः५० को समयमात्र देखाउँछन् । विसं २०७४ मा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालको पाँच वर्ष बिताउँदैछन् । उनीहरुले पनि घण्टाघरमा नयाँ घडी राख्न सकेनन् । यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा तिनै नेता र उम्मेदवारलाई मतदाताले सोध्ने गरेका छन्, “घण्टाघरको सुई कहिले […]